Indlu kunxweme lweLake Volgo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguВиктор
UВиктор ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Indawo ecocekileyo yendalo kwingingqi yaseTver, indlu kwihlathi lepine, umoya ococekileyo ococekileyo - yintoni enye efunekayo ukuze uthathe ikhefu kwisixeko. Kuphela ukuzonwabisa - kwaye ziyafumaneka!
Indlu ibekwe kwindawo ekhethekileyo kwingingqi yaseTver, kwintsimi yeziko lokuzonwabisa laseChaika. ISeliger ngenene yenye yeendawo ezingekamoshwa ngamandla ngabantu malunga ne-ecology kunye nobuhle bendalo.
Indlu yahlulwe ibe ngamacandelo amabini aneendawo zokungena ezihlukeneyo, utata uhlala kwelinye, ungumnikazi wendlu, esinye isiqingatha sendlu silinde abahambi kunye neendwendwe unyaka wonke! Indlu inayo yonke into oyifunayo kwiiholide zasehlotyeni nasebusika.
Okona kubaluleke kakhulu, le ndlu imi ngokoqobo elunxwemeni loLwandle oluhle lweVolgo, apho ibhedi yoMlambo omkhulu iVolga ihamba khona.
4.62 · Izimvo eziyi-13
Kwabo bahamba ngemoto, sicebisa ukuba undwendwele eyona nto inomtsalane eSeliger. Ezona ziphambili, ngokuqinisekileyo, iicawa ezindala zaseRashiya kunye neemonki, i-Nilo-Stolobenskaya hermitage eyaziwayo, i-Shirkov churchyard, i-Holy Spring, i-monastery ene-porcelain iconostasis. Kwaye ngokuqinisekileyo enye yezona ndawo zibalulekileyo eRashiya ngumthombo woMlambo omkhulu waseRashiya weVolga.
Umbuki zindwendwe ngu- Виктор
I live in very beautiful city in my country - Saint-Petersburg, but even so I like traveling very much and discovering new countries with my family. I wish that your trip was amazing and unforgettable!
Ngaliphi na ixesha siya kukwazi ukucebisa into kwaye sincede iindwendwe.